I-Exclusive Waterfront Rooftop Getaway - I-Airbnb
I-Exclusive Waterfront Rooftop Getaway
Uma ufuna indawo engcono kakhulu e-Caloundra... phuma ngomnyango uye e-Bulcock Beach, amabha nezindawo zokudlela, isihlabathi, nokushaya kwenhliziyo kwendawo, awukwazi ukuba ngcono! Izitezi ezintsha ze-Reno .., igumbi lokugezela, ifenisha, nophahla, zaqedwa ngoMashi 2021! Uphahla lwakho oluyimfihlo lugcwele i-BBQ, futhi endaweni yokugezela ye-spa, lubeka indawo ekahle yokubaleka! Asikho isidingo sokungena emotweni, yonke into isesandleni sakho....
Eyakho siqu iqukethe esanda kulungiswa, ifulethi lokulala eli-1 eli-chic, izitebhisi ezi-spiral eziya ophahleni lwakho lwamanzi olukhethekile, eline-BBQ, elinechibi lokuchibiyela phansi. Amabha, izindawo zokudlela kanye neBulcock Beach ekuphumeni kwakho endaweni yokungcebeleka!
4.90 · 146 okushiwo abanye
Isimo esikhululekile sale ndawo enamanzi, amabhishi, izindawo zokudlela, amathilomu namabha, ukuklabalasa kweholide! Ukubamba ilanga elangeni ophahleni lwakho lomuntu siqu, noma ukuhambahamba ngezinyawo ukuya esihlabathini kuyindlela ephelele yokuphumula!
Kukhona iJetSki eqashwayo esihlabathini esiphambi kwebhilidi, funda ukuntweza e-Happy Valley, kanye nendlela yokuhamba engasebhishi yonke indlela eya e-Moffat Beach uma lokho kuyinto yakho...
Kunekhefi esakhiweni esingaphansi esibheke emanzini, nakho konke ukudla nokuzijabulisa ongakufuna ngaphesheya komgwaqo! IsiThai, inhlanzi namaships, i-wood fire pizza, Greedy Gingos Mexican, Indawo yokudlela yase-Aqua, iHogs Breath, i-Drift Bar, nezitolo zika-ayisikhilimu. Umgwaqo Omkhulu waseCaloundra ukude nebhlokhi elilodwa kuphela.
Njengomphathi wakho sihlala sitholakala... umlayezo nje awukude.